ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် (အင်္ဂလိပ်: Secretary-General of the United Nations; အတိုကောက် UNSG သို့မဟုတ် SG) သည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ပင်မဌာနငါးခုတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ အကြီးအကဲဖြစ်သည်။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် ကုလသမဂ္ဂ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိအဖြစ် တာဝန်ယူသည်။ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကုလသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ၏ အခန်း ၁၅ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကုလသမဂ္ဂ ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်
၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇ (၂၀၁၇-၀၁-၀၁) မှစ၍
နယူးယောက်မြို့၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု
(သက်တမ်းတိုးနိုင်၊ ၂ ကြိမ်ထိ ကန့်သတ်ထား)
ဇွန် ၂၆၊ ၁၉၄၅; ၇၆ နှစ် အကြာက (၁၉၄၅-၀၆-26)
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်မှာ အန်တိုနီရို ဂူတာရက်စ် ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှတဆင့် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
၂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်များ စာရင်း
၃ သက်ရှိထင်ရှား အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းများ
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ နေထိုင်ရာသည် အမှတ် ၃၊ ယောက်ရိပ်သာ / ဆက်တွန်ရပ်၊ မဟက်တန်၊ နယူးယောက်မြို့၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖြစ်သည်။ နေအိမ်သည် ၁၉၂၁ ခုနှစ်တွင် အန်း မော်ဂန် အတွက် ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂသို့ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် လှူဒါန်းခဲ့သည်။
(၁၉၀၀–၁၉၉၆) ၂၄ အောက်တိုဘာ ၁၉၄၅ –
၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၄၆
United Kingdom အနောက် ဥရောပနှင့် အခြား ထရီဗီလီ အား တရားဝင် မရွေးချယ်ရသေးမီ ယာယီ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အဖြစ် ခေတ္တ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ 
၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၄၆ –
၁၀ နိုဝင်ဘာ ၁၉၅၂
Norway အနောက် ဥရောပနှင့် အခြား နုတ်ထွက် 
၁၀ ဧပြီ ၁၉၅၃ –
၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၉၆၁
Sweden အနောက် ဥရောပနှင့် အခြား ကွန်ဂိုသို့ ငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင်အတွက် အသွား မြောက်ရိုဒီးရှား (ယခု ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံ) တွင် လေယာဉ်ပျက်ကျပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ 
၃၀ နိုဝင်ဘာ ၁၉၆၁ –
၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၇၁
Burma အာရှ-ပစိဖိတ် တတိယအကြိမ် ရွေးချယ်ခံရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ 
၁ ဇန်နဝါရ္ ၁၉၇၂ –
၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၈၁
Austria အနောက် ဥရောပနှင့် အခြား သူ၏ တတိယသက်တမ်းအား တရုတ်မှ ဗီတိုအာဏာဖြင့် ပယ်ချခဲ့သည်။ 
ဟာဗီးယား ပဲရက်စ် ဒီကွေးလျား
၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၈၂ –
၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၁
Peru လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံ တတိယသက်တမ်းအတွက် အရွေးချယ်မခံ 
ဘူးထရို့စ် ဘူးထရို့စ် ဂါလီ
၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၉၂ –
၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၆
Egypt အာဖရိက သူ၏ ဒုတိယသက်တမ်းအား အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ ဗီတိုအာဏာဖြင့် ပယ်ချခဲ့သည်။ 
၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၉၇ –
၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၆
Ghana အာဖရိက သက်တမ်းနှစ်ကြိမ်အပြီး အနားယူခဲ့သည်။ 
၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၇ –
၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆
South Korea အာရှ-ပစိဖိတ် သက်တမ်းနှစ်ကြိမ်အပြီး အနားယူခဲ့သည်။ 
၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇ –
Portugal အနောက်ဥရောပနှင့် အခြား
ကုလသမဂ္ဂ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများ၏ နိုင်ငံသားပြ မြေပုံ
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်များ၏ မွေးဖွားရာ ဒေသများ
သက်ရှိထင်ရှား အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းများပြင်ဆင်
(1944-06-13) ဇွန် ၁၃၊ ၁၉၄၄ (အသက် ၇၇)
မေ ၂၀၂၂ အထိ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသော အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းမှာ ဘန်ကီမွန်း ဖြစ်သည်။ ​နောက်ဆုံး ကွယ်လွန်ခဲ့သော အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းမှာ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သော ဟာဗီးယား ပဲရက်စ် ဒီ ကွေးလျား (၁၉၈၂ -၁၉၉၁) ဖြစ်သည်။ကိုဖီအန်နန်မှာ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဩဂုတ်လ၁၈ရက်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
↑ Teltsch, Kathleen. "Town House Offered to UN", New York Times, 15 July 1972. Accessed 27 December 2007.
↑ Stout၊ David။ "Lord Gladwyn Is Dead at 96; Briton Helped Found the UN"၊ New York Times၊ 26 October 1996။ 31 October 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The United Nations: Trygve Haldvan Lie (Norway). Accessed 13 December 2006.
↑ The United Nations: Dag Hammarskjöld (Sweden) Archived 20 September 2014 at the Wayback Machine.. Accessed 13 December 2006.
↑ United Nations: U Thant (Myanmar). Accessed 13 December 2006.
↑ The United Nations: Kurt Waldheim (Austria). Accessed 13 December 2006.
↑ The United Nations: Javier Pérez de Cuéllar (Peru). Accessed 13 December 2006.
↑ The United Nations: Boutros Boutros-Ghali (Egypt). Accessed 13 December 2006.
↑ The United Nations: The Biography of Kofi A. Annan. Accessed 13 December 2006.
↑ Ban Ki-moon is sworn in as next Secretary-General of the United Nations။ United Nations။
↑ McFadden၊ Robert D.။ "Javier Pérez de Cuéllar Dies at 100; U.N. Chief Brokered Peace Pacts" (in en-US)၊ The New York Times၊ 2020-03-05။
↑ "Kofi Annan, former UN chief, dies at 80"၊ BBC။
↑ Former UN chief Kofi Annan dies။ Al-Jazeera။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကုလသမဂ္ဂ_အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်&oldid=727094" မှ ရယူရန်
၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။